Search ... Mmeri nke maazị Trump na ntụliakaelu mba Amerịka akpalitela ngagharị iwe na mba ahụ	Details	Written by Voice of Nigeria	Thursday, November 10, 2016	Puku kwuru puku ndị mmadụ pụtara n’okporo ụzọ na steeti dị iche iche na–eme ngagharị iwe gbasara mmeri Donald Trump nwetere na ntụli aka elu nhọpụta onye isi ala mba Amerịka.
Read more ...	Bridget Kelley ekwuona na Gọvanọ Chris Christie mara maka brijigeti	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, October 22, 2016	Otu nwanyị onye rụrụ Gọvanọ Chris Christie ọrụ dịka onye aka mbụ ya na Steeti New Jersey agwana ndị ọkaịkwe na Gọvanọ Christie mara ịhe banyere brijigeti.
Brijigeti bụ aha E jiri mara arụ ahụ mere n’obodo Fort Lee na New Jersey, site n’abalị 9 ruo abalị 13 nke ọnwa septemba afọ 2013. Ngalaba na-ahụ maka njem okporo ụzọ mechiri ọwara abụọ n’ime ọwara atọ si na akwa mmiri George Washington abata na Fort Lee. Nke a malitere n’isi ụtụtụ n’oge ndị mmadụ ji aga ebe dị ịche ịche.
Read more ...	Okammuta Chika Okpalike na-aza ajuju n'Igbo Radio	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, January 04, 2016	Gere nu ajuju onu a Chidi Igwe gbara Okammuta Chika Okpalike, onye na-akuzi nkuzi na mahadum Nnamdi Azikiwe n'Awka.
Read more ...	Okammuta Oby Okonkwo na-ekwu maka onodu umu nwanyi Igbo	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, October 17, 2015	Okammuta Oby Okonkwo na-aza anyi ajuju onu gbasara onodu umu nwanyi n'ala Igbo. Okonkwo na-akuzi nkuzi na mahadum Nnamdi Azikiwe di n'Awka. Okwu ya gbadoro ukwu n'otutu ihe e nwere ike ime ka onudu umu nwanyi na-adiwaga mma n'ala Igbo.
Read more ...	Okammuta Okey Ndibe na-ekwu maka ilu Igbo	Details	Written by Chidi Igwe	Monday, April 20, 2015	Okammuta Okey Ndibe na-ekwu ihe o choputara maka ilu Igbo.
Read more ...	Okammuta Okey Ndibe na-ekwu maka akwukwo o dere, Foreign Gods, Inc.	Details	Written by Chidi Igwe	Wednesday, April 15, 2015	Okammuta Okey Ndibe na-ekwu maka akwukwo o dere, Foreign Gods, Inc.
Read more ...	Edward Snowden na-akwado ịlọta Amerịka	Details	Written by Chidi Igwe	Tuesday, March 03, 2015	Nwa afọ mba Amerịka ahụ bizi na Rushịa kemgbe afọ 2013 maka ịgba ama megide otu CIA na-enwe nkwado ịlọghachi Amerịka. Onye ọkaikpe Snowden na Rushịa, Anatoly Kucherena, gwara ndị nta akụkọ na Snowden na ndị ọkaikpe si mba Amerịka na mba Jamini amalitego ịkpa ụbụbọ maka...
Read more ...	Onye isi ọchịchị mba Izrel adọọla mba Amerịka aka na ntị maka mba Iran	Details	Written by Chidi Igwe	Tuesday, March 03, 2015	Aka na-achị mba Izrel, bụ Benjamin Netanyahu, adọọla mba Amerịka aka na ntị maka nzukọ mkparịta ụbụbọ ịkpe udo ahụ nke na-aga n’ihu ugbu a n’etiti mba ụwa na mba Iran. Mgbe ọ na-agwa ndị omebe iwu nke mba Amerịka okwu n’isi obodo mba Amerịka...
Read more ...	Learn Igbo Language Online	Details	Written by Chidi Igwe	Thursday, February 19, 2015	www.igboschool.org
Gọọmenti Canada ga-enye ndịda-anyanwụ Afrịka ọgwụ mgbochi ebola	Details	Written by Igbo Service, VON, Lagos	Friday, August 15, 2014	Gọọmenti mba Canada ekwuela na o ge-enye otu puku ọgwụ e ji eme ntule ọgwụgwọ nje ọrịa ebola, iji nye aka gbochie ndapụta ọrịa na mpaghara ndịda anyanwụ Afrịka. O mere mkpebi a ka ụlọ ahụike mba ụwa bụ World Health Organisation...
GUCHA AKUKO A...	Whitney Houston anwuola	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Otu nwanyị olu ọma, onye Amerịka, a ma ama maka ịgụ egwu, bụ Whitney Houston, anwụọla. E butere ozu Whitney n’ime ụlọ oriri n’ọñụñụ Beverly Hilton.
Read more ...	Taa ka ndi mmadu na-achu afo	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Taa ka a na-achụ afọ. Taa bụ abalị mbụ nke ọnwa jenụwarị ka a na-achụ afọ n’ebe dị iche iche. E jiri ọkpụkpa ọkụ nọkaụtụ mara ịchụ afọ.
Read more ...	Steven Harper: “Kanada agaghi eziga ndi agha na Mali	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Onye isi ọchịchị mba Kanada, Steven Harper, ekwuona na Kanada adighị njikere iziga ndị agha na mba Mali, na-agbanyeghị na ndị Al-kaida juputeziri na Mali.
Read more ...	Otutu umu Nigeria anwuala n’ala bekee site na ita ahuhu	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Ndị Nigeria bụ oji abalị eme ihe. Ha abụghị kwa oji abalị eje, ndị ekperima cha cha! Kama na ọ bụ mgbe ohere dapụtara ha iji gbo mkpa nke ha. Dịka agwa ndị e nwe enwe ha na-emechasị ihe ọga chọrọ, tupu ha nwee ohere ime ihe nke dị ha mkpa.
Read more ...	Onwu egbuola Hugo Chavez	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Onye isi ala mba Venezuela, Hugo Chavez, anwụọla. Ọ nwụrụ taa bụ Tuzdee. Ọ gbara nanị afọ 58 tupu ọnwụ egbuo ya.
Read more ...	Ome ihe jide ofo!	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Ị mela were wetara anyị egwu Chief Stephen Osita Ọsadebe, ọ gụrụ maka Ome ife jide Ọfọ. Nke a na-akọwa n’asụsụ Igbo kajara akaja.
Read more ...	Ogbunigwe gburu mmadu 3, meruo mmadu 176 ahu na Boston	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Mgbọ ogbunigwe awụnyego aja na garrị n’obodo Boston, na Steeti Massachusetts, na mba Amerịka. N’ụbọchị Mọndee, ụwa niile gbakọtara na Boston maka asọmụmpi ọsọ onye mere ike ya, nke a kpọrọ Boston marathon, n’olu bekee.
Read more ...	Nwoke onye Edmonton adagbuona onwe ya na Cancun	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Chris Rogers gbara afọ 21. A mụrụ ya na St. Albert, na Alberta. Ọ na-aga akwụkwọ na mahadum University of Alberta.
Read more ...	Nigeria bu Obodo ndi Nzuzu,HO! HA!	Details	Written by Chidi Igwe	Saturday, July 05, 2014	Gịnị bụ nzuzu? Onye nzuzu na-akpa agwa dịka onye na-enweghị echiche ma ọlị. Onye nzuzu na-akpa agwa ka ụmụ aka. Onye nzuzu na-akpa agwa ka onye mmanya na-egbu. Onye nzuzu na-akpa agwa ka onye agwụ na-akpa.
Read more ...	Ndi uwe ojii egbugo Tamerlan, jido Dzhokhar na Watertown	Details	Written by Chidi Igwe	Friday, July 04, 2014	Igidi ọgụ ahụ mmadụ abụọ ndị omekome ahụ tụrụ ogbunigwe na Boston na ndị ọrụ nchekwa na-agba kemgbe mkpụrụ abalị anọ abịago n’isi njedebe.
Guo Akuko a...	Page 1 of 2 Start